Soosaarayaasha Hawada Soo-kabashada Heat - Warshadda & Shirkadayaasha Shirkadaha Soosaarayaasha Heat-soo-kabashada
Ventilator-ka Soo-kabashada Tamarta Deegaanka ee Sifeeyaha Gudaha
Nidaamka sifeynta waxtarka sare ee saddexda-lakab: shaandhada aasaasiga ah, shaandhada dhexdhexaadka ah iyo shaandhada waxtarka sare ee HEPA. Waxtarka nadiifinta PM2.5 ee mashiinka oo dhan waa ilaa 99%. Guddi isku-dhafan Zinc-aluminium ah oo leh waxqabad sare oo ka hortag ah iyo muuqaal fudud oo qurux badan. Qaab dhismeedka gudaha ee isku dhafan ee EPP haddii uu leeyahay awood sare, caabbinta saamaynta, ilaalinta deegaanka iyo ur aan lahayn. Mashiinka DC ee 5 xawaare ah, isticmaalka tamarta oo hooseeya, buuqa yar iyo cimriga dheer. Qulqulka cusub ee loo qaabeeyey ...
Hakinta Hawo Soosaarayaasha Tamarta Heat
Hawo-qaboojiyeyaasha ka-soo-kabashada tamarta ayaa ah nidaamyada hawo-qaadidda dhexe ee bixiya hawo nadiif ah, ka saarta hawada qallalan ee gudaha iyo isku dheelitirka qoyaanka dhismaha dhexdiisa. Ka sokow, waxay isticmaali karaan kuleylka laga soo ceshaday hawada duugoobay si ay u kululeeyaan hawada nadiifta ah ee soo geleysa heerkul raaxo leh. Tani dhammaantood waxay gacan ka geysaneysaa abuurista jawi nadiif ah oo raaxo leh oo kor u qaadaya wanaagga dadka isticmaala dhismaha. Astaamaha ugu Muhiimsan ee E-Smart HEPA Quwadaha Soo Celinta Tamarta: Baaxadda hawo ballaaran oo ballaadhan laga bilaabo 150m3 / h ilaa 6000m3 / h, 10 xawaare ayaa socda ...
Qalabka Hawada ee Soo Celinta Tamarta ee Darbiga leh
Sifeyn badan oo HEPA ah oo ah 99% hawo & banaanka hawo soosaarka kuleylka iyo dib u soo kabashada qoyaanka ee hawo hagaagsan Gudaha niyad jab yar oo gudaha ah si looga fogaado hawo wasakheysan banaanka hareeraha waxtarka sare leh matoorada DC Tilmaanta tayada Hawada Hawada (AQI) kormeerka Aamusnaanta Hawlgal fudud
Ventilator-ka Tamarta Vertical Energy oo leh Fiirayaasha HEPA
Seddex sifeyn ah 99% sifeynta HEPA Xoogaa cadaadis gudaha ah oo xoogaa Heerka soo-kabashada tamarta Karti ikhtiyaar sare leh oo leh matoorrada DC koontarool fog Midabaynta naqshadeynta Maareynta muuqaalka Muuqaalka Muuqaalka LCD Muuqaalka Vertical Energy Recovery